WHO & IATA: 3 Wave an'ny COVID hiparitaka haingana kokoa, mamely mafy kokoa an'i Afrika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Eswatini Breaking News » WHO & IATA: 3 Wave an'ny COVID hiparitaka haingana kokoa, mamely mafy kokoa an'i Afrika
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Eswatini Breaking News • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • fampiasam-bola • Vaovao • People • Safety • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Jona 24, 2021
Fitsapana fampiharana IATA Travel Pass
Ny sidina avaratra sy fizahantany dia mpamatsy vola lehibe ary làlan'aina ho an'ny kaontinanta afrikanina. IATA sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia niresaka tamin'ny mpanao gazety androany momba ny vinavina mialoha. IATA dia maniry ny hampiharana manerana izao tontolo izao ny pass IATA hisorohana fatiantoka avo kokoa aza.
Ohatrinona ny vintana ateraky ny seranam-piaramanidina afrikanina sy ny fizahantany hamokatra indray ny indostrian'ny fiaramanidina sy ny dia?
Ny onja fahatelo amin'ny aretina COVID-19 dia antenaina hihatra mafy any Afrika ary mety hiteraka fahasimbana bebe kokoa, araka ny fampitandremana nataon'ny World Health Organization (WHO).
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina sy ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany dia mankasitraka ny IATA ary miantso fiaraha-miasa, fifandraisana ary fampiharana efa voadinika tsara mba hiantohana ny hoavin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany eto amin'ny kaontinanta.
Hatraiza ny sazy mety ho azon'ny indostria afrikanina aviation?
Ity lohahevitra ity ary faminaniana mahatsiravina nataon'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana no foto-kevitry ny fampahalalam-baovao IATA WHO androany tany Paris.
Ny COVID-19 dia niteraka fatiantoka 7 tapitrisa dolara amerikana ary nametraka asa very 7 tapitrisa tany amin'ny kaontinanta afrikanina. Seranam-piaramanidina 8 any Afrika no voatery nametraka ny fatiantoka. Ny fiaramanidina manerantany dia nandray a 413 lavitrisa fahaverezana. Araka ny IATA, ny normal vaovao amin'ny orinasa dia tsy andrasana raha tsy amin'ny 2024.
Mandehana amin'ny pejy manaraka mba hamakiana ny pitsopitsony rehetra >>
Pelican Products ho azon'ny Platinum Equity